एनआइसी एसिया बैंकको मुनाफा ३ अर्ब : ईपिएस ३४.८७ रुपैयाँ, अन्य अवस्था कस्तो ? | शुभयुग
एनआइसी एसिया बैंकको मुनाफा ३ अर्ब : ईपिएस ३४.८७ रुपैयाँ, अन्य अवस्था कस्तो ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख १५, बुधबार (१ साल अघि)
१५ बैशाख,काठमाण्डौ – एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ।
आज (बुधबार) प्रकाशित विवरण अनुसार विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा २०.०७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा हासिल गरेको छ। यो मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.०७ प्रतिशतले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले २ अर्ब ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
बैंकको वितरणयोग्य मुनाफामा पनि बृद्धि भएको छ । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफामा पनि १९९.५४ प्रतिशतले बृद्धि भएर १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानीमा बृद्धि आएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष यहि अवधिमा बैंकले ५ अर्ब ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा यो समिक्षा अवधिमा यस्तो आम्दानी १९.२३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि भएसंगै प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि झिनो अंकले बृद्धि भएको छ । अघिल्लो बर्षको यहि अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३४ रुपैया ६८ पैसा रहेकोमा अहिले त्यो १९ पैसाले बढेर ३४ रुपैयाँ ८७ पैसा पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई रेसियो) २७.८२ गुणा रहको छ रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १६२ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ ।